नेपाली सिनेमाका लागी पुष्पल खड्का नया नाम भएपनि म्युजिक भिडियोका लागी यो चिनिएको नाम हो । पुष्पलले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । मोडलिङ् हुदै सिनेमामा प्रबेश गरेका पुष्पलको पहिलो सिनेमा अझै पनि हो । तर हरेक जसो अन्र्तरवार्तामा उनले पहिलो सिनेमाको रुपमा दर्पण छांयालाई लिने गरेका छन् ।
पहिलो सिनेमाबाट दर्शक र सिनेमाकर्मिका बिचमा राम्रो छाप छाडेका पुष्पलले अझै पनि लाई पहिलो सिनेमा नभनी डेब्यु सिनेमा भन्ने गरेका छन् । उनले एक अन्र्तरवार्तामा आफुले डेब्यु अझै पनि बाट गरेपनि आफ्नो सिनेमा दर्पण छांयानै भएको बताएका हुन् । त्यसोत उनले दर्पण छांयालाई किन पहिलो सिनेमा भने ? कतै उनलाई दर्पण छांया सफल हुने लोभको तानेको छ हैन् ?
पक्कै पनि होईन्, किनभने उनले अझै पनिमा सिनेमाका मुख्य कलाकार सुर्दशन थापाको साथीको भुमिका निभाएका थिए । उनले सुरुवात त्यसै सिनेमाबाट गरेपनि उनलाई मुख्य भुमिकाबाट भने दर्पण्न छांया २ ले दर्शक माझ ल्याउदैछ । त्यसैले पनि पुष्पल दर्पण छांया २ लाई आफ्ुनो पहिलो र चुनौतिपुर्ण सिनेमा मान्छ्न् । पहिलो सिनेमा त उनले मुख्य भुमिकामा काम गरेको हुनाले भयो भने चुनौती, उनको पहिलो मुख्य भुमिका रहेको सिनेमा सफल हुनैपर्ने छ ।
नेपाली सिने नगरीमा एउटा सोचाई छ, जुन कलाकारको पहिलो सिनेमा सफल हुन्छ, उसलाई सिनेमाको कमि हुदैन् । हुनपनि ड्रिम्सबाट डेब्यु गरेकि साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले पहिलो सिनेमा सफल भएपछि फर्केर हेर्नु परेको छैन् । अथवा उनलाई एक पछि अर्को सिनेमाको अफर आईरहेको छ । पहिलो सिनेमा सफल भएर अफर आउने कलाकारमा साम्राज्ञी मात्र एउटा उदाहरण भने होईनन् । यसअघि पनि थुप्रै कलाकार पहिलो सिनेमा सफल भएकै कारण ब्यस्त भए । त्यसै पनि नेपाली सिनेमाका लागी निर्माता निर्देशक कि नया अनुहारलाई आफ्नो सिनेमामा ब्रेक दिन चाहान्छन् कि त चलेकै अनुहार । यि निर्माता निर्देशकका लागी उपयुत्त हुनका लागी पनि पुष्पललाई सिनेमा सफल हुनैपर्ने चुनौती छ । पुष्पल मात्रै होईनन्, यस सिनेमाबाट मुख्य भुमिकामा रहेका अरु २ नायिकालाई पनि सिनेमा सफल हुनैपर्ने चुनौति छ । पुष्पलका लागी त चुनौती र अवसर दुबै यस सिनेमा बन्न सक्छ । दर्पण छांया २ को छांयाकन सक्काए लगत्तै शिल्पा पोखरेल संग जोडि बाधेर मंगलममा देखिने सुरसार कसेंका पुष्पललाई भने सिनेमाको कमि छैन् । सिनेमा रिलिज हुनु अघि नै ब्यस्त बनेका पुष्पलका लागी यो ब्यस्तता सधै रहला भने यसै भन्न सकिदैन् ।